Tag: kumhanya peji | Martech Zone
Tag: kumhanya peji
Dhindaini Yemufananidzo Iko Kunofanirwa Kwekutsvaga, Nhare, Uye Shanduko Kugonesa
Kana vagadziri vemifananidzo nevatori vemifananidzo vaburitsa yavo yekupedzisira mifananidzo, ivo kazhinji havana kugadzirirwa kudzikisa saizi refaira. Kumanikidza kwemifananidzo kunogona kudzora zvakanyanya saizi refaira remufananidzo - kunyangwe 90% - pasina kudzikisira hunhu kune ziso rakashama. Kuderedza saizi refaira remufananidzo kunogona kuve nemikana yakati wandei: Kurumidza Kutakura Nguva - kurodha peji nekukurumidza kwave kuzivikanwa kuti kunopa ruzivo rwepamusoro kune vashandisi vako uko kwavasingazodi.
Nei Peji Yekumhanyisa Yakakomba? Kuedza Kwako uye Kuvandudza Yako
Wednesday, May 15, 2019 Wednesday, May 15, 2019 Tyson Kurumidza
Mazhinji masaiti anorasikirwa nehafu yevashanyi vavo nekuda kwekunonoka peji kumhanya. Muchokwadi, iyo yepakati desktop webhu bounce mwero ndeye 42%, avhareji nhare mbozha peji peji bounce mwero ndeye 58%, uye avhareji post-tinya landing peji bounce mwero masosi kubva ku60 kusvika 90%. Kwete yekunyepedzera manhamba nechero nzira, kunyanya tichifunga nezvekushandisa nhare kuri kuramba kuchikura uye kuri kuramba kuchinetsa nezuva rekukwezva nekuchengetedza kutarisisa kwevatengi. Zvinoenderana neGoogle, iyo
9 Zvikanganiso Zvinouraya Zvinoita Kuti Nzvimbo Dzinonoke
China, January 11, 2018 Mugovera, January 13, 2018 Douglas Karr
Anononoka mawebhusaiti anokanganisa bounce mitengo, shanduko mitengo, uye kunyangwe yako yekutsvaga injini masosi. Izvo zvakati, ndinoshamiswa nenhamba yemasaiti ayo achiri kunetseka zvinotyisa. Adhamu akandiratidza saiti nhasi yakaitirwa paGoDaddy iyo yaitora yakawandisa masekondi gumi kutakura. Iye murombo uyo anofunga kuti vari kuchengetedza maviri emari pakubata ... pachinzvimbo ivo vari kurasikirwa matani emari nekuti vangangove vatengi vari kubhadhara kwavari. Takakura kuverenga kwedu chaizvo
13 Mienzaniso yeMaiti Saiti Yekumhanyisa Yakakanganisa Bhizinesi Mhedzisiro
Svondo, Kurume 26, 2017 Svondo, Kurume 26, 2017 Douglas Karr
Takanyora zvakati wandei nezve izvo zvinhu zvinokanganisa kugona kwewebhusaiti yako nekukurumidza kurodha uye nekugovana kuti kumhanya kunonoka kunokuvadza bhizinesi rako. Ndiri kutendeseka kushamiswa nenhamba yevatengi vatinotarisana navo vanoshandisa yakawandisa nguva uye simba pane zvemukati zvekushambadzira uye nzira dzekusimudzira - zvese uku uchidzirodha pane yakasarudzika inomiririra ine saiti isina kugadzirirwa kurodha nekukurumidza. Isu tinoramba tichiongorora yedu yega saiti kumhanya uye